Frantsay mpanjanaka no mpitondra ny « tsimok’aretina » – MyDago.com aime Madagascar
Iray amin’ireo teti-panorona maizina nampiasain’ny Frantsay mpanjanaka teto Madagasikara ny politikan’ny zarazarao anjakana. Làlana iray nataony nanatanterahana izany ny fampidirina toe-tsaina tsy ifampatoky. Tsy maintsy natao ny fomba rehetra hanapotehana sy hamongorana mihitsy izay sehatra samihafa mihazona ny firaisan-kina sy ny fihavanan’ny Malagasy. Anisan’ireny, ohatra, ny nanafoanana ny andro « fandroana » na ny taom-baovao malagasy. Nofantenana ihany koa izay olona iarahana miàsa amin’ny fitantanana ny fitondrana mpanjanatany.
Nahomby ny tetika satria tsy niandry fotoana ela akory dia efa niseho ny vokatra. Mbola tao anatin’ny fanjanahantany dia niaraha-nahafantatra ny zava-nitranga tamin’ny fiasian’ireo mpamadika, ireo mpisolelaka, ireo nampiasaina hanohitra ny MDRM,sns. Nipoitra ihany koa ny tsy fitovizan-kevitry ny Malagasy rehefa niditra tamin’ny fahazoana fahaleovantena sy ny taona maro nifandimby taorian’izany. Ary iaraha-mahita toy ny tafika andrefan-tanàna ankehitriny ny tsy fifampitokisana intsony eo amin’ny samy Malagasy : eo amin’ny samy vahoaka sy indrindra eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra. Esorintsika ao anatin’izay ny toe-tsaina miahiahy olona noho ny resaka fisolokiana izay anisan’ny mirongatra amin’izao vaninandro iainantsika izao. Mioty ny vokatra nafafin’ny mpanjanaka taloha tamin’ny fotoan’androny ankehitriny ireo Frantsay manana sain-dratsy ankehitriny izay mitetika mandrakariva ny hitsentsitra ny harenan’ny Malagasy sy hanjakazaka eto. Tafiditra ao anatin’izay koa ireo Malagasy nanary ny maha-izy azy ary manana lasin-tsaina lalim-paka frantsay ka manao fomba fiainany.
Haharitra taonjato telo eo farafahakeliny ny haharetan’io « tsimok’aretina » tsy fifampitokisana nafafin’ny mpanjanaka io vao ho foana araka ny mpandinika. Afaka manao kajikajy kely isika ny amin’ny taona nidiran’ny fanjanahantany teto amintsika hatramin’izao hoe firy taona izay no lasa sy mbola ambiny vao ho foana io toe-tsaina io. Tsy maintsy tonga saina amin’io tetika mpanjanaka io isika Malagasy ankehitriny raha tiana ny hanafohezana io fe-potoana haharitra io. Raha tsy izany holalaovin’ireo taranaka mpanjanaka frantsay sy ny saribakoliny eto fotsiny ihany isika handritra ny taona maro hifanesy. Tsy ny voalaza loatra tao amin’ny Baiboly ny amin’ny tsy tokony hitokisana olona akory no mahatonga ny Malagasy tsy hifampatoky, eo ihany izay, fa ny Frantsay mpanjanaka mihitsy no rangory fototry ny afo amin’io.
Rahoviana isika no hanana tanteraka ny fiandrianantsika ?
Mijoroa ! Mitoloma !
Tafika Malagasy sy ny politika : Inona no ambadik’ity « aretina » isan-karazany ?
Auteur Solo Razafy*Publié le 13 mars 2012 Catégories Politique
2 pensées sur “Frantsay mpanjanaka no mpitondra ny « tsimok’aretina »”
Efa fantatra izany fa mba misy ezaka ve handavana na haniliana an’ireo
renikely ireo???aiza izy no tsy ahazo vahana hatrany.Ahoana koa no tokony
hanaiken’ireo manamboninahitra Malagasy ireo mpikaramanady tsotsoka ireo any @ Toby any??.
matikanikely daholo ao koa moa ny tsy mivakiloha.
Midina andalambe dia hasaina mody ireo vazaha tsy nahazo fahazoandalana hijanona eto Mcar, reo vazaha lany mofo ireo ,tsy adino ny mitondra pancarte manao hoe :ianareo zay manohana andradomelina modia any aminareo fa aza mamerina fanjanahantany vaovao eto fa tsy DONDRINA OTRAnDOMELINA DAOLO NY MALAGASY !
Précédent Article précédent : Nanondrana indray « Baomba »?
Suivant Article suivant : I Andry Rajoelina no tena sakana !